Tag: kpakpando | | Martech Zone
E wezụga ọnya afọ m, onye na-ahụghị Starbucks n'anya? Anyị edeela tupu oge ahụ ọ bụ obere ihe ị na-eme nwere mmetụta dị ukwuu. Ebe ọ bụ na ịnweghị ike ịtụgharị n'ọtụtụ obodo na-ahụghị Starbucks, na Starbucks bụ otu ihe na nzukọ azụmahịa, ọ dị ka ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na ị kwesịrị ịnwe ngwa jikọtara na CRM gị ebe ị nwere ike ịkwụsị $ 5 Starbucks® eGift Card site na ozi-e. KọfịSender bụ ngwa na-enye ohere
Tọzdee, Disemba 29, 2015 Tọzdee, Disemba 29, 2015 Douglas Karr
Ana m ewepụta kaadị mgbasa ozi na-adịghị mma mgbe m nwere. Onwe m, dị ka onye nwe azụmaahịa, ụjọ na-atụ m mgbe ọ bụla m hụrụ onye ahịa n'ihu ọha pịa ụlọ ọrụ na ntanetị. Karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ iwu na ọ bụghị ụta maka ndị ahịa na-ahụ maka ndị ahịa. Ndị CSR anaghị eme iwu, ọ bụkarị onye dị elu karịa na ọfụma na-ejikwa ihe ndị ahụ. N'okwu a, agbanyeghị, m ga-ekerịta ihe a mere n'ihu ọha
Ọnụ ọgụgụ ndị a kwesịrị imetụta echiche gị banyere ire ahịa ekwentị
Sunday, November 8, 2015 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
You budata ụdị nke Mobile App anyị kachasị ọhụrụ - iOS, Android? Anyị ka na-arụ ọrụ na ịhazi ọdịnaya mana usoro ahụ dị, mana ọ gbalịsighi ike iwepu ya na ala maka ekele nke ngwa ngwa ngwa mkpanaka sitere na Bluebridge! Anyị nwere obi ụtọ dị ukwuu banyere ohere ọ nwere! Anyị enweelarị pọdkastị ahịa anyị na usoro usoro ahịa anyị ndị na-ejikwa ngwa ahụ, kwa! Anyị na-ebipụta ihe omume ma nwee ike izipu